आज हामी तपाईंलाई जो नबी Rakhimov देखाउने छौँ। उहाँले भाग लिनुभयो जसमा हाम्रो नायक चलचित्रहरू, अब सम्म लोकप्रियता गरिन्थ्यो। हामी उज़्बेक सोभियत अभिनेता र फिलिम र थिएटर, साथै शिक्षकहरू बारेमा कुरा गर्दै छन्। एक आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध काम - फिल्म सामान्य Agzamova को भूमिका "मौन को कोड।" को सोभियत संघ को जनता कलाकार को शीर्षक पुरस्कृत गरियो।
Rahimov नबी Kokand मा, नोभेम्बर 7, 1911 मा जन्म भएको थियो। आज, यो उज्बेकिस्तान छ। मञ्चमा, 1918. देखि हाम्रो नायक उहाँले एक पीतल ब्यान्ड को भाग रूपमा Clarinet अध्ययन। 1926 देखि 1929 को Kokand अभिनेताको थियेटर पार्टी क्लब थियो। उहाँले ताशकहरुट को शहर मा, Hamza पछि नाम उज़्बेक राज्य नाटक थिएटर मा काम, नाटक स्टुडियो मा शिक्षित थियो। उहाँले 1929 मा यस विद्यालयबाट स्नातक
1929 देखि उहाँले Hamza पछि नाम राज्य थियेटर को एक अभिनेता थियो। एक युद्ध अनुभवी। 1941 मा उहाँले सैन्य स्कूलमा थियो। 1942-1943 मा उज्बेकिस्तान अगाडि-लाइन टोली एक भाग थियो। चलचित्र मा, हाम्रो नायक 1943 मा अभिनय गर्न थाले एक सय फिलिमहरु भन्दा डबिंग मा भाग लिए। फिल्म र मञ्चमा, हाम्रो नायक दुवै प्रतिभा tragedian र हास्य अभिनेता प्रदर्शन गरेको छ। यो उज़्बेक सोभियत गणतन्त्र को सिनेमाटोग्राफरहरू को संघ थियो।
1946 देखि 1961, एउटा पछि नाम थिएटर कला को ताशकहरुट राज्य संस्थान को एक शिक्षक थियो Ostrovsky। अभिनेता को आइतबार बिहान कार्यक्रम airs जो "मुस्कान", को नियमित सहभागीहरू र आयोजकहरु को एक थियो "उज़्बेक रेडियो।" 1945 देखि कम्युनिस्ट पार्टी थियो। उहाँले ताशकहरुट मा 23 नोभेम्बर मा, 1994 मा मृत्यु भयो। Chigatayskom चिहान मा गाडे अभिनेता। आफ्नो पत्नीको नाम प्रेम थियो। त्यो पनि हाम्रो नायक जसको नाम एडमन्ड एक छोरा थिए छ 1993. मा मृत्यु भयो।
शीर्षक र पुरस्कार
को सोभियत संघ - अभिनेता नबी Rakhimov को उज़्बेक गणतन्त्र को जनता कलाकार र पछि को शीर्षक सम्मानित गरिएको थियो। उहाँले सोभियत संघ को राज्य पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यसरी, यो प्ले Urganzhi K. Yashen मा भूमिका उल्लेख थियो "को क्रान्ति को डन।" उहाँले उज़्बेक SSR Hamza को राज्य पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। पुरस्कार अल्बानी को भूमिका हाइलाइट, त्यो प्ले शेक्सपियर गरेको "राजा Lear" प्ले। धेरै पुरस्कार, तिनीहरूलाई बीचमा। लेनिन, श्रम को लाल ब्यानर, "उल्लेखनीय उपलब्धिहरू लागि" को विजेता यी पुरस्कार अन्तिम posthumously सम्मानित गरिएको छ। उहाँले विभिन्न पदक प्राप्त गरेको छ। उहाँले उज़्बेक गणतन्त्र को सर्वोच्च सोभियत को Presidium देखि आदर प्रमाणपत्र को होल्डरलाई छ। उहाँले सबै-संघ चलचित्र महोत्सव, मिन्स्क मा आयोजित मा भाग। यो घटना को भाग जो अभिनेता पुरुष भूमिका ल्याएको छ फिल्म पहिलो पुरस्कार, जित्यो रूपमा "स्याउ चालीस एक वर्ष।"
Rahimov नबी ठूलो प्रशंसा विलियम शेक्सपियर गरेको काममा Iago रूपमा आफ्नो भूमिका लागि प्राप्त "Othello।" प्रदर्शन Hamza पछि नाम नाटक को थिएटर मा स्थान लियो। Desdemona - Abrar Khidoyatov Othello र सारा Ishanturaeva यस उत्पादन प्ले। उज़्बेक थिएटर क्लासिक हाम्रो नायक Tikhon Truffaldino Barkley KUPER, Laertes, Mamadali रूपमा निम्न थिए।
को थिएटर मा भूमिकाको
1929 मा Rahimov नबी प्ले "विद्रोह" मा Yegor को भूमिका खेलेका। 1930 मा, त्यो "एक ब्रिफकेस संग मानिसले" र दुई निर्माण मा भाग लिए "कपास किरा।" "भेडा स्रोत" र "षडयंत्र को इतिहास" - 1931 मा उहाँले पनि नाटकहरु को एक जोडी मा काम गरे। 1932 मा, "बाल्न हुनेछ", आफ्नो सहभागिता, "Vancha बिन", "Niқob yirtildi" संग निम्न प्रदर्शन आए "आनन्द को सडक।" "घर मालिकनी", "मेरो मित्र," "थोर-मा mor", "हस्तक्षेप": 1934 मा, Rahimov नबी निम्न प्रदर्शन मा भूमिका मिल्यो। 1935 मा, अभिनेता "Hamlet", "विवाह" र "निरीक्षक" को निर्माण मा भाग लिए।
स्क्रिनमा पहिलो काम हाम्रो नायक फिल्म 1943 मा प्ले जो रातो सेना, को भूमिका थियो "मातृभूमि को उपहार।" 1953 मा, त्यो मा Alexei को छवि embodied "खाडी र laborer।" 1955 मा, फिलिम बाहिर स्क्रीन Aliyev को भूमिका मा अभिनेता संग "स्टेडियम मलाई भेट्नुहोस्"। 1956 मा उहाँले "पवित्र रक्त" मा Shakasym रूपमा देखा पर्नुभयो। 1957 मा उनले फिलिम "अरल को माझिहरु" मा Dzhadegera Esemuradova प्ले। 1958 मा, हाम्रो नायक साथ दुई चित्रहरु मा काम गरिरहेको छ: "ज्वालातारानेबुला साल" र "तपाईं Charmed।"
सामान्य Agzamova - 1989 मा जो हाम्रो नायक आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध भूमिकाको एक प्ले छ "मौन को कोड", को रिलीज देखे। यो टेप थप कुरा गर्नुपर्छ। यो एक गुप्तचर बारेमा छ। फिल्म Jizzakh र ताशकहरुट शहर मा मास्को ओलम्पिक समयमा सेट गरिएको छ। आउटडोर क्याफे को एक मा कहानी मा Jizzakh क्षेत्रमा आपराधिक अनुसन्धान को उप प्रमुख छ जो एन्ड्रयू पाक, मा एक सशस्त्र आक्रमण छ। उहाँले मृत्यु, र यो संग Sabirzyan Artikov - उहाँलाई भेट्न आए मानिस। आक्रमण अनुसन्धान, Lt. कलस्सी यात्रा Samatov पहिलो आपराधिक अनुसन्धान क्षेत्र को प्रमुख को पोस्ट को deprived। त्यसपछि उहाँले कालो बजार र lurks को वस्तु बन्दछ। तिनीहरूले स्थानीय प्रहरी भ्रष्ट छन् भन्ने जान्न जब आफ्नो मित्र, एक पूर्व ओपरेटिव, संग Samatov भ्रमण, को माफिया विरुद्ध लड्न थाल्छन्।
यो भूमिका पछि, हाम्रो नायक धेरै उल्लेखनीय फिलिमहरु संलग्न थियो। विशेष मा, टेप बाहिर स्क्रीन "स्टोन आइडल," "jackals" र "Yўl bўlsin" मा 1989 मा। 1990 मा, हाम्रो नायक फिलिम मा चालक दल को एक अभिनेता द्वारा प्ले "आश्चर्य नारी।" 1991 मा, त्यो स्क्रीन मा चलचित्र "फलाम मानिस" मा न्यायाधीश को छवि embodied पनि फिल्म तारा अङ्कित "न्यायको दिन।"
किशोरकिशोरीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सोभियत फिलिम: सूची र समीक्षा
फिल्म "एक सुगा संग लेडी"। अभिनेता, भूमिकाको
"Naruto": संसारको विवरण जस्तै fillers
सफलता को घटक: को भिजुअल र ध्यानपूर्वक चुनिएको अभिनेता। "नरक गर्न मलाई तान्नुहोस्" - काले हास्य संग एक रहस्यमय रिबन
साइप्रस कहाँ छ? निस्सन्देह, यो देवताहरूको Bosom मा!
किसान-जरा removers "आँधी" - समीक्षा। किसान "आँधी" (मार्गदर्शन): सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया
दासत्व संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मूल थियो? राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका मा दासत्व को उन्मूलनको
प्राचीन रोम को Periodization। महत्वपूर्ण तिथिहरु र घटनाक्रम
आफ्नो हात soshot सानो छोरा र छोरी आमा संग मशरूम सुट
Vasily Shukshin "माइक्रोस्कोप": साना मानिसको ब्रह्माण्डको एक मोडेल
किशोरीहरूको वस्त्र थोक: ब्रान्ड र फैशन रुझान
कसरी कीडे चाँडै र प्रभावकारी ल्याउन